Ogaden News Agency (ONA) – Qoomiyada Tigreega oo Xididaha Loosiibayo & Janarallo Shaqadii Katagay.
Qoomiyada Tigreega oo Xididaha Loosiibayo & Janarallo Shaqadii Katagay.
Wararka naga soo gaadhaya wadanka Gumaysiga Itoobiya ayaa sheegaya in uu hirgalay mid kamid ah qorshayaashii Raysal-wasaaraha cusub ee gumaysiga Abiye Axmed Cali, kaas oo ahaa in qoomiyada Tigreega awoodeeda aad loodhimo.
Xog rasmi ah oo soo gaadhay Wakaalada Wararka Ogadenia ONA ayaa sheegaysa in ay iscasileen qaar kamid ah Janaraaladii ushashay qoomiyada Tigreega ee awooda badan kudhex lahaan jiray wadanka Itoobiya, aadna looqadarin jiray.
Sida xogta aan kuhelayno waxaa shaqadii iskaga tagay Majar General Takelabirhan Walde’aragay iyo General Kinfe Dangew oo labaduba udhashay qoomiyada Tigreega, waxaana lasheegayaa in Janaraaladan culays lagu saaray in ay shaqada katagaan kadib markii lagu eedeeyay in ay lunsadeen mayaayiin lacag ah oo ay lahayd shirkada korontadu.
Sidoo kale xog wali aanaan xaqiijinin ayaa sheegaysa in ay shaqiidii katageen taliyihii ciidamada gumaysiga Itoobiya General Samore Yonis iyo taliyihiin ciidanka sirdoonka wayaanaha General Getachew Asafa, kuwaas oo sida lasheegay cadaadis lagu saaray in ay shaqada iskaga tagaan.
Is casilaada Samore Yonis iyo Getachew Asafa ayaa haday rumowdo qoomiyadaha Oromada iyo Axmaarada uga dhigan guul taariikhi ah waxayna ahaayeen awoodaha kaliya ee kuhadhay gacanta qabiilka Tigreega, waxaana meesha kabaxaya cabsidii ay kaqabeen dhinaca ciidamada.
Janaraalada is casilay ayaa lasheegayaa in ay shaqadii katageen kadib markii culays lagu saaray in ay sidaas yeelaan isla markaana looban qaaday aduun lacageed iyo waliba amaan lasiin doono, waxaana lasheegayaa in ay shaqada iskaga tagi doonaan saraakiil kale oo Tigree ah kuwaas oo hadaba lagu daba jiro.
Xukuumada Cusub ee Abiye Axmed iyo Dameke Mokonen ay hogaaminayaan ayaa utafa xaytay sidii ay xididada ugu siibi lahaayeen qoomiyada Tigreega oo in badan talada wadanka looga dambeeyay.
Wixii war ah ee General lada kusaabsan kala soco ONA.